हुवावेको ५ जी प्रविधिमार्फत जासुरी गर्दै चीन -
१७ असार २०७७, बुधबार २०:०६ 80 पटक हेरिएको
एजेन्सी। चीनले विकास गरेको भनेको हुवावेको ५जी प्रविधि चिनियाँ राष्ट्रिय स्वार्थप्रति समर्पित हुने विषयले चीनमा चिन्ता उत्पन्‍न गराएको छ । पूर्व साइबर सेक्युरिटी प्रमुख डा. गुलसन राईले भने, “हुवावेको ५ जी प्रविधिबाट म निकै चिन्‍तित बनेको छु । किनभने यसले व्यक्तिगत जीवनलाई निशाना बनाउने र उनीहरुको निगरानी गर्ने र जासुसीका लागि प्रयोग भइरहेको छ ।”
महामारीका कारण अधिकांश मानिसहरु घरबाट काम गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुका गतिविधि अवस्था र पछिल्लो समय भारत-चीनबीचको हिंसात्मक झडपपछि चीनले व्यक्तिले गर्ने क्रियाकलापमा निगरानी बढाएकाे राईले बताए ।
गत जूनमा भारतीय रणनीतिक क्षेत्रमा दशौं हजारपटक साइबर आक्रमण भएका छन् । भारतीय सुरक्षा क्षेत्र, बैंकिङ र अन्य मुख्य रणनीतिक क्षेत्रमा यस्ता आक्रमणले निशाना बनाएका कारण उनीहरुले ह्याक हुन नदिन उच्‍चतम प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी चीनले केही गलत सूचनाहरुलाई भारतका लागि प्रायोजन गरेकोसमेत डा. राईले बताएका छन् । भारतले चिनियाँ एप्सहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनु उयुक्त भएको उल्लेख गर्दै अब तथ्यांको मापदण्ड निर्धारण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने र उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
यसअघि मेरिकी दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई ‘५-जी’ उपकरण बेच्न प्रतिबन्ध लागेपछि चिनियाँ कम्पनी हुवावेले भारतमा आक्रामक बजार विस्तार गरेको थियो ।
केही मुलुकहरुले सुरक्षा चुनौती देखाउँदै खेदेका थिए । त्यसैले भारतसँगको सम्भावित सम्झौता ५-जी विस्तारका लागि हुवावेलाई विशेष महत्त्वको हुन सक्ने बताइएको थियो ।
पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा पनि प्रतिबन्ध खेपेको हुवावेमाथि अन्य देशले पनि प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सोचिरहेका बेला भारतले यसलाई अंगालेको थियो । चीनले हुवावेका उपकरणको सहयोगमा जासुसी गर्ने गरेको अमेरिकाको आरोप थियो ।
चीनले सन् २०१९ मा ५ जी नेटवर्कको सुरुआत गरेको थियो ।
सूचना नै नदिइ गृहले